Austria " Journey-Assist - Fialam-boly. Hitan'ny olona. fiantsenana Climate
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Aotrisy
Ski trano fandraisam-bahiny any Aotrisy
Trano kafe Australiana
24 Mey 2020
Hihaona amin'ny hatsaran'i Austria 🙂
Toe-javatra manan-danja ao Aotrisy
Aotrisy, na ny marimarina kokoa - ny Repoblika Aostraliana - fanjakana any Eropa Afovoany, fibodoana ny laharana faha-94 manerantany amin'ny resaka mponina, ary toerana faha-112 amin'ny lafin'ny velarantany.
Repoblika parlemantera federaly izy io, mizara ho faritra federaly 9 - Lower Austria, Salzburg, Tyrol, Styria, Vienna, Voralberg, Carinthia, Burgenland, Upper Austria.
Izy io dia manana sisintany iraisana miaraka amin'ny Repoblika Czech any avaratra, miaraka amin'i Slovenia any avaratra-atsinanana, miaraka amin'i Hongria any atsinanana, miaraka amin'i Slovenia sy Italia any atsimo, miaraka amin'i Liechtenstein sy Suisie any andrefana, ary miaraka amin'i Alemana any avaratra-andrefana.
Sahabo ho telo ampahefatry ny mponina no Katolika.
Firenena tsy mila fampidirana manokana i Austria. Ny mpizahatany eoropeanina dia raiki-pitia tamin'ny sary an-tendrombohitra mahavariana tamin'ny taonjato faha-18, raha vao nanomboka nipoitra ny fizahan-tany amin'ny fomba maoderina.
Mampitambatra an'i Aotrisy ny hatsaran'ny natiora miaraka amin'ny marobe amin'ny tantara sy ny kolontsaina. Ao amin'ny faritra rehetra misy anao dia afaka mahita lapa be dia be, fiangonana, lapa.
Noho ny lalana mahafinaritra eo an-tampon'ny Alps, azo atao ny mamakivaky faritra marim-pototra ao anatin'ny indray andro ary mankasitraka ny toetra mahafinaritra eo an-toerana.
Ho an'ireo tia ny mpizaha tany sy ny opera, i Vienna dia azo antoka fa toerana tsara indrindra.
Vienna - renivohitr'i Aostria
Ho an'ireo mpankafy ny mozika klasika dia tena tsara i Salzburg.
Salzburg - toerana nahaterahan'i Mozart
Ary raha miala sasatra any amin'ireo farihy madio sy loharano mafana dia afaka mandeha any Carinthia ianao.
Karantia - faritr'i Aotrisy misy farihy mahafinaritra indrindra
Ireo mpankafy ny zavakanto maoderina dia ho liana amin'ny tanànan'i Graz.
Ny renivohitry ny faritra Austrian Styria dia ny tanànan'i Graz
Ireo izay te hahita ny tany mahavariana indrindra eto Eropa dia tokony hitsidika ny foibe akaikin'i Salzburg. Tao amin'ity faritra ity no nipetraka ny mpamorona Austrian malaza taloha, V.A. Mozart.
Fototry ny tanety ao Salzburg
Ho an'ireo tia trano fandraisam-bahiny any Aotrisy dia misy ihany koa ny toerana tsara tarehy izay heverina ho tsara indrindra amin'ny Alps raha ny vidiny sy ny kalitaony.
Ski fialan-tsasatra any Aotrisy
Ary i Austria dia iray amin'ireo firenena mety indrindra amin'ny fialantsasatra ski matihanina. Misy ny antony rehetra amin'izany: hotely manara-penitra sy miovaova, "après-ski" mandroso tsara (amin'izany, i Austria dia manamarika indrindra mialoha ireo firenena eoropeanina hafa), tehezan-damba voadio tsara (ny tsara indrindra amin'ny Alps rehetra).
Ambonin'izany, ny ankamaroan'ireo tehezan-tendrombohitra ireo dia tsy "hafanana" mihitsy: ny fanaovana ski eto dia mila fahaizana tsara ianao. Ary koa any Aotrisy dia misy glacier marobe mamela anao hitondra amin'ny toetrandro rehetra.
Kaprun dia fialantsasatra mahafinaritra any Austria
Mayrhoven - toeram-pilasiana ski - tena Mkah of the Alpes
Ski resort Ischgl, Aotrisy
Toetr'andro any Aotrisy
Ririnina any Vienna
Vienna amin'ny fahavaratra
Vienna tamin'ny fararano
Noho ny fanamaivanana tena mifanohitra amin'izany (any Aostralia, na aiza na aiza faritra iva mifandimby misy tendrombohitra misy lanezy), ny toetr'andro eo an-toerana dia miavaka amin'ny fizarana zoro. Any amin'ny faritra iva amin'ny faritra atsinanana amin'ny firenena, dia misy toetr'andro somary mafana (ny isotherm of Jolay any Vienna dia +19, ary ny volana Janoary - 0). Mafana izy io raha mamboly voaloboka. Tsy fahita firy ny haintany. Raha miakatra ny lohasaha Danube ianao, mitombo ny hamandoan'ny rivotra, manjavona ireo tanimboaloboka, saingy tena mafana sy mafana eto koa. Mandritra ny hafanana amin'ny fahavaratra dia manomboka miempo be ny lanezy any an-tendrombohitra. Izany dia miteraka tondra-drano lehibe, ao anatin'izany ny Danube, izay misy ny haavon'ny rano 9 m indraindray.
Orana any Vienna
Ny mari-pana ao Australiana amin'ny ohatra omen'i Vienna
Ny andraikitry ny Alps amin'ny toetr'andro Australiana
Ny alps, izay miakatra amin'ny lalan'ny rivotra mando any andrefana, dia mitana ny toeran'ny rivotra hamandoana lehibe. Noho izany, ny rotsakorana any amin'ireo faritra be tendrombohitra dia midina lavitra noho ny any lemaka manodidina. Ny rotsakorana farany dia mianjera amin'ny morontsiraka andrefana sy avaratra amin'ny faritry ny alpine. Mety ho 3 mm mm ny isan-taona, ary ny toetrandro dia toy ny nebula sy ny saron'ny rahona. Eo amin'ireo afovoan-tany anatiny amin'ireo Alps sy amin'ireo lohasaha mihidy dia ambany be io isa io ary tsy mihoatra ny 000 1 mm. Ny rotsak'orana ambony indrindra dia mirefy 000 ka hatramin'ny 1 m. Any no misy ny zon'ny rahona lehibe indrindra. Fa ambonin'ny 500 2 m dia mazava foana sy maina.
Fotoana fizahan-tany any Aotrisy
Any Aotrisy dia misy fizaran-tany 2 ho an'ny fizahantany: fahavaratra (manomboka Jolay ka hatramin'ny Aogositra) ary ririnina (Krismasy Katolika). Ny volana tsara indrindra hitsidihana an'i Wina dia ny volana septambra sy mey. Any amin'ny ankamaroan'ny toeram-pialan-tsasatra dia manomboka amin'ny Novambra ary mifarana amin'ny volana aprily.
Weather in Austria anio + forecast
Safidio ny faritra na tanàna ilainao, ary koa ny sosona ary mahazoa ny fampahalalana ilainao. Layers - hamandoana, hafainganam-pandehan'ny rivotra, onja, orana, rahona sns sns any Aostralia. Ireo rehetra ireo dia misy amin'ny widget eto ambany.
Fiantsenana any Aotrisy
Lohalaharana any Aotrisy
Saika tsy azo heverina ho mpifaninana mitovy amin'i Italia sy Frantsa i Aotrisy amin'ny resaka fiantsenana. Na izany aza, mbola mahafinaritra ny fanaovana ny fividianana eto.
Any amin'ny tanànan'ny any Aotrisy, ny vidiny dia eo amin'ny salan'isa eoropeana na somary ambany kely ihany. Mandritra izany fotoana izany, ny arabe miantsena indrindra dia tena voalamina tsara. Tsy te-hiala fotsiny ny magazay.
Fotoana mety hiantsena any Aotrisy
Ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fiantsenana eto dia ny tapany faha-2 desambra (alohan'ny krismasy katolika). Androany, toy ny karatra fialantsasatra lehibe ny arabe, ary afaka manangona be ianao amin'ny fihenam-bidy.
Fiantsenana any Aotrisy alohan'ny krismasy
Any Aotrisy, mitovy amin'ny firenena eropeana hafa, misy fihenam-bidy 2 vanim-potoana: ririnina sy fahavaratra. Ny fivarotana fahavaratra dia manomboka amin'ny faran'ny volana Jona. Maharitra hatramin'ny andro farany aogositra. Amin'ny voalohany, ny fihenam-bidy dia atolotra hatramin'ny 30%, fa amin'ny farany dia mahatratra hatramin'ny 80%.
Rehefa any mpivarotra any Aotrisy
Ny dingana ririnina dia misy dingana 3:
Ny 1 voalohany dia manomboka ny 20 ka hatramin'ny 25 desambra.
Faha-2 - hatramin'ny 25 Desambra ka hatramin'ny 5-7 Janoary.
Avy eo, tamin'ny tapaky ny volana Janoary, nanomboka ny hetsika lehibe indrindra, izay mihena ny vidiny na aiza na aiza vokatra. Haharitra hatramin'ny fiandohan'ny volana martsa izany.
Inona no hividy any Aotrisy
akanjo sy kiraro;
fitaovana ho an'ny skiing;
lovia sy zavatra haingon-trano vita amin'ny kristaly sy porsilihazo;
Tsotra sy matsiro ny fahandroana Australiana
Tsotra ary kaloria no betsaka ny lovia aostraliana. Ny Australiana dia tia sakafo matsiro, mihinana henan-kisoa, henan'omby, zanak'ondry, akoho amam-borona, ary sakafom-biby.
Tian'ireo Australiana ny lovia hena
Ny lovia Austriana malaza indrindra dia ny schnitzel. Tena mendrika ny mankany amin'ny trano fisakafoanana hanandrana azy io. Ity tapa-mofo kely mamy misy mofo ity dia mamela olona vitsy tsy hiraharaha.
Sosisina malaza ao Vienna
Ireo saosisy Viennese malaza dia matetika antsoina hoe "frankfurters" amin'ny menus fisakafoanana eo an-toerana. Araka ny fiheverana iray dia ny mpivaro-kena any Frankfurt Johann Laner no nanoratra ny resin'izy ireo, izay nifangaro henan-kisoa sy hen'omby. Marihina fa aleon'ny Aostraliana manendasa fa tsy mahandro saosisy, ka mampitombo ny kaloria efa avo lenta amin'ity vokatra ity.
Apple strudel - ny tsindrin-tsakafo nasionaly any Aostralia
Karatra fandraharahana nahandro Australiana iray hafa dia strudel. Izy io dia famenoana paoma feno ranom-boankazo, izay nendahina ho andina ary hafafy amin'ny siramamy, nofonosina koba manify.
Tsindrin-tsakafo malaza iray hafa avy any Aostralia dia i Sachertorte. Izy io dia misy mofomamy biscuit sôkôla, izay hosorana fonosana apricot ary araraka amin'ny gilasy sôkôla. Tsy mitovy amin'ny tsiro tany am-boalohany.
Aza mandalo - fivarotana kafe Aostraliana 🙂
Cafe any Aotrisy
Mandritra ny fitsidihana an'i Aotrisy, misy tsy afaka manakana ny tranon'ny kafe malaza eo an-toerana. Ireo andrim-panjakana ireo dia fantatra fa ny mpitsidika dia afaka mamaky gazety, mifandray ary milalao lalao mangina samihafa ao anatin'izy ireo.
Betsaka ny kafe no atolotra any Aotrisy
Fivarotana kafe Australiana no manolotra kafe eran'ny kapoaka misy ronono - grossers, kafe kaopy kely misy ronono - Kleiner Browners, kaopy misy kafe mainty - Schwarzer sy kaopy kafe sy crème - mélange.
Izay mpandeha rehetra any Aotrisy dia tsy ho malaina. Eto amin'ity firenena ity dia misy zavatra azon'ny mpizahatany hitoetra ho tombontsoany sy tiany.
Coat of arm of Austria
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika parlemantera federaly
Kaody finday: 43 +
Sehatra Internet: .at
Efa indray andro izay tany Vienna. Eny an-dàlana. Tsy taitra amin'ny tanàna. Efa tsapa fa props daholo izany rehetra fa tsy mifandraika amin'ny tena tantaran'ireny tsangambato rehetra momba ny kolontsaina ireny. (RNH).
Saingy mety ho izany satria satria saika nihazakazaka daholo ny zava-drehetra, saingy natao hampijanonana ... ary mahatsapa ny rivotra iainana amin'ity tanàna ity ..